Ciidamada Itoobiya oo Howlgalo ku qabqabtay Dadka iyo waxyaabaha Qarxa Baladweyne – SBC
Ciidamada Itoobiya oo Howlgalo ku qabqabtay Dadka iyo waxyaabaha Qarxa Baladweyne
Ciidamada Itoobiyaanka ah iyo kuwa soomaalida ah ee ku sugan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa Howlgalo ay sameeyeen 24kii saac ee la soo dhaafay waxay ku soo qabqabteen dad iyo Miinooyin loogu aasay wadooyinka qaar ee marinka u ah ciidamada Itoobiya .
Sida ay xaqiijinayaan dadweynaha ku dhaqan magaaladaas ciidamadani ayaa la arki karay iyagoo cutubyo isku qeybiyay oo howlgalo baaxadleh ka sameynaya deegaanada koonfureed ee magaalada Baladweyne ku yaala .
Waxaa la sheegay in ay ciidamada Itoobiyaanka ahi soo qabqabteen dad ku sugnaa xaafadahaasi iyagoo ku tuhmaya in ay ka dambeeyaan miinooyinka la aasay, waxaana aan la xaqiijin karin inta ay tiro la egyihiin dadka la qabqabtay.
Mudooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo wajahday shacabweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Baladweyne cabsi ku aadan weeraro qaraxyo ah oo lala eegto miilataarka Itoobiya ee halkaasi gaaray .
Waxayna tani ka mid noqoneysaa cabsiyadii dadka ay muujinayeen oo soo ifa faala baxaya hadiiba ay jiraan qaraxyo laqabtay iyo ciidamada Oo iyaga dadka qab qabasho ku sameynaya ka dib baaritaano ay sameyaan.